Program | YUYU BEAUTY - Part 2
You are at:Home»Category: "Program" (Page 2)
Useful of Vaseline
သဲလေးတွေအတွက် Veseline နဲ့ အသုံးဝင်မယ့် လုပ်နည်းလေးတွေကို K က လုပ်ပြထားပါတယ်။ မျက်နှာကို Glow…
Funny Dragqueen Makeup
ဒီတစ်ခါမှာတော့ KK က မိတ်ကပ်သေချာပြင်ပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲ နည်းနည်း ဟာသဘက်လေးကို သွားမယ်နော်… ဒီတော့ KK ဘယ်လိုများ…
Exercise for Slim Legs
ခြေထောက်လေးတွေ ပေါင်တံလေးတွေ သေးသေးသွယ်သွယ်ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းလေးဘယ်လို လုပ်ရမလဲလို့ Haruna ကို လာမေးတဲ့သူတွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီနော်။ ကဲ..ဒါဆို…
DIY Makeup Organize
စက္ကူဘူးတွေ…ချစ်စရာကောင်းတဲ့အအေးခွက်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီး ဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်အောင်ပြန်လုပ်မလဲဆိုတာ ဒီ Video လေးနဲ့အတူတူကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်။ ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
How to treat Scars, Acne and Blackhead
အမာရွတ်၊၀က်ခြံ၊အမဲစက်တွေ ပျောက်ပြီး တင်းတင်းအိအိလေးရအောင် သဘာဝ လုပ်နည်းလေးကိုလုပ်ပြပေးပါ့မယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အိမ်မှာပဲထိန်းသိမ်းလို့ ရတဲ့အသားအရည်ထိန်းသိမ်းနည်းလေးကို လုပ်ပြပေးထားပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံး ၊…
Treatment for Panda Eye
ပန်ဒါမျက်ဝန်းလေးတွေဖြစ်နေတဲ့ ညီမလေးတွေအတွက် ၊မျက်ကွင်းညိုတာ ပျောက်ကင်းစေတဲ့သဘာဝနည်းလေးတွေကို လုပ်ပြထားပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၊အားနည်းတာတွေ၊အအိပ်လွန်တဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်လေရှိတဲ့ မျက်ကွင်းညိုခြင်းတွေကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေပါနော်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့…
Random Makeup Challenge!!!
ကျရာမိတ်ကပ်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ Yumie တစ်ယောက် ဘယ်လိုလှအောင် ပြင်မလဲဆိုတာကို ဒီ Video လေးမှာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
Let’s Eat Thai Style Papaya Salad
သဘောင်္သီးထောင်းလို့ဆိုလိုက်ရင် မကြိုက်သူခပ်ရှားရှားနော်…ကေကေလည်းအရမ်းကြိုက်တယ်.. စပ်စပ်ကလေးစားရတာပိုကြိုက်…အခု ကေကေက ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာပြီး ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာ လက်စွမ်းပြလို့ရမယ့် ထိုင်းစတိုင်လ် သဘောင်္သီးထောင်းလေးကို လုပ်ပြမှာဆိုတော့…
ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပျိုမေတို့ သိသင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို Dolly က ပြောပြပေးမယ်နော်။ ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
How to Draw Wing Liner?
အခုခေတ်မှာ Eyeliner မှာမှ အတောင်ပံလေးတွေတပ်တာမျိုးလေးတွေက အရမ်းကိုခေတ်စားလာပါတယ်နော်… ဒါပေမယ့် Wing Liner ကိုသေချာမဆွဲတတ်လို့ စနစ်တကျဆွဲနည်းလေးပြပေးပါဆိုတဲ့သူလေးတွေအတွက်…